कस्ले हरायो डडेल्धुरामा कांग्रेसलाई ? | Samacharpati.com – A Complete News Portal From Pokhara Nepal
कस्ले हरायो डडेल्धुरामा कांग्रेसलाई ?
प्रकाशित मिति: 2074 आषाढ 18 आइतबार(July 2, 2017) 3:35 PM बजे Posted By: Narayan Bhattarai
समाचारपाटि १८ असार – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराको सदरमुकाम अमरगढीमा हार व्यहोरेपछि त्यसलाई स्थानीय कांग्रेसले पीडा महसुस गरेको बताएका छन् । कांग्रेसले परम्परागत रुपमा आफ्नो आधार क्षेत्रको रुपमा लिंदै आएको डडेल्धुराको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकामात्र गुमाएन थप दुई गाउँपालिकामा समेत हार ब्यहोर्यो ।
एमालेले अमरगढीमा पहिलो पल्ट झण्ड फहराएको हो । झिनो मतअन्तरमा जितेपनि एमालेले भने कांग्रेसको किल्ला भत्काएको प्रतिकृया दिएको छ । बिजयी घोषणा भए लगत्तै एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल डडेल्धुरा पुगेका थिए । बसपार्कमा आयोजित सभामा उनले कांग्रेसको किल्ला भत्काएको दावी गरे ।
अमरगढी नपाको बहुमत वडाहरुसहित प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेले जित्यो । यसअघि ०४९ र ०५४ को दुवै स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले सवै वडासहित मेयर/उपमेयर जितेको थियो । मेयरमा एमाले बिपिन ओझा १ सय २८ मत अन्तरले बिजयी भए । उनले ३ हजार ७ सय ६८ मत प्राप्त गरेभने निकटतम् प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका डिल्लीराज जोशीले ३ हजार ६ सय ४० मत मात्र पाए ।
उपमेयरमा संगिता भन्डारीले ३ हजार ५ सय १७ मत ल्याइन् भने कांग्रेसकी पार्वती देवी झुकालले ३ हजार ३ सय ९ मत । ६ वडाध्यक्ष एमाले र ५ वटा वडा कांग्रेसले जित्यो ।
एमालेले नवदुर्गा गाउँपालिका पनि हात पर्यो । साविकका कोटेली, नवदुर्गा, मणिलेक गाविस कांग्रेसको बलियो अधार क्षेत्रको रुपमा चिनिन्थ्यो । यि मध्ये बेलापुरमा मात्रै अघिल्ला स्थानिय चुनावमा एमालेले जितेको थियो । नवदुर्गामा एमालेका कवेन्द्र बिष्ट अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनले कांग्रेसका जिल्ला सचिव लक्ष्मीराज अवस्थीलाई २ सय २९ मत अन्तरमा पराजित गराए । बिजयी बिष्टले २ हजार ९ सय ६९ मत प्राप्त गरे भने अवस्थीले २ हजार ७ सय ४५ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी डम्वरी ओलीले जितिन् ।
कांग्रेसले अजयमेरु गाउँपालिका पनि गुमायो । अजयमेरुमा माओवादी केन्द्रले जित्यो । माओवादीका उमेश प्रसाद भट्टले कांग्रेसका बागी उम्मेदवारको फाईदा लिए । टिकट बितरणमा असन्तुष्ट भएका लोकराज भट्ट र किशोर बिष्टलाई कांग्रेसले थुमथुम्याउन नसक्दा हारको पी व्योहोर्नु पर्यो । बागीले कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारले भन्दा झन्डै दोब्वर मत ल्याए । दुवैले प्राप्त गरेको मत जोड्दा बिजयी उम्मेदवारको भन्दा झन्डै पाँच सय बढी छ ।
अजयमेरुको अध्यक्षमा माओवादीका भट्टले २ हजार २ सय ७१ मत पाए भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेका धन बहादुर साउदले १५ सय ९२ मत पाए । कांग्रेसका बागी उम्मेदवार भट्टले १५ सय ५७ मत ल्याए । जवकी कांग्रेसका कमल सिह भाटले ८ सय ७२ मत पाए ।
उपअध्यक्षमा माओवादीकी कलापती भाँणले १ हजार ७ सय २ मत प्राप्त गरी जितिन् । उनकी प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी कमला बिष्टले १ हजार ६ सय २६ मत पाइन् । कांग्रेसकै बागी किसोर बिष्टले १ हजार ५ सय ७ मत ल्याए ।
कांग्रेसले शानदार जित गन्यापधुरामा मात्रै भयो । यो देउवाको गाउँपालिका हो । देउवा र पत्नी डा. आरजु देउवा राणाको मतदाता नामावली गन्यापधुरा १ असिग्राम रुवाखोलाको मतदान केन्द्रमा छ । दुवै जनाले यहि केन्द्रबाट मतदान गरे । अध्यक्षमा नवल सिह मल्लले ३ हजार ३ सय ६९ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेका बिरेन्द्र मल्लले १ हजार ९ सय ४६ मत मात्रै प्राप्त गरे । उपाअध्यक्ष कमला देवी ठगुन्नाले ३ हजार ४ सय ७ मत प्राप्त गरिन् भने निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी कृष्णा देवी पनेरुले १ हजार ८ सय ७३ मत प्राप्त गरिन् ।
सबै वडा गुमाएर जित्यो कांग्रेसले
कांग्रेसले भागेश्वर गाउँपालिकामा सवै वडा गुमाएर अध्यक्ष र उपध्यक्षा जितेको छ । पाँच वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा अध्यक्ष काग्रेसकी कौशल्या भट्टले जितिन् । उनले १ सय ६३ मत अन्तरमा जितेकी हुन् । उनले २००७ मत प्राप्त गरिन् भने निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका बिष्णु बहादुर ठकुराठीले १८४४ मत पाए ।
कौशल्य नेपाल बिद्यार्थी संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला नेता रघुवरकी छोरी हुन् । उपध्यक्षमा कांग्रेसका पदम बोहराले १८ सय ४४ मत पाए । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेकै कमला मालीले १४ सय ९५ मत प्राप्त गरिन् । वडाध्यक्ष सबै एमाले निर्वाचित भए । वडा नम्वर ५ मा माओवादीले जित्यो ।
परशुराम नगरपालिकामा कांग्रेसका भिम बहादुर साउद लामो समयसम्म दोस्रो नम्बरमा थिए । वडा १ देखि ११ सम्मको मत गणना सिहंदा पनि साउद माओवादी केन्द्रका शेरसिंह माल भन्दा पछाडी थिए । तर, अन्तिम् वडा १२ को मतगणनाले साउदलाई जितादियो । साउदले उक्त वडाबाट ८ सय ६८ मत पाए जवकी उनको प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका मालले १ सय ६५ मत मात्रै पाए । साउदले माललाई ५ सय २७ मतअन्तरले उछिने । बिजयी साउदको कुल मत ४ हजार ६ सय २९ पुग्यो । माओवादीका मालले ४ हजार १ सय २ मतमा सिमित भए ।
‘जितिन्छ भन्ने बिश्वास थियो, जितियो पनि’ साउथ भन्छन्, ‘अव जनताको प्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनताको सेवा सुबिधा र नगरको समृद्धीका लागि काम गरिन्छ ।’ उपमेयरमा कांग्रेसकी कलापती बोहराले पनि वडा नम्बर १२ कै सहयोगमा जितिन् । बोहराले ४ हजार २ सय १३ मत प्राप्त गरिन् । उनकी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी माओवादीकी बिमला महताले ३ हजार ६ सय ३८ मत प्राप्त गरिन् । बोहरा पनि मेयर जस्तै ११ नम्वर वडासम्म करिव २ सय मतले पछाडी थिइन् ।
कांग्रेसले नै हरायो
पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको जिल्ला डडेल्धुरामा कांग्रेस कमजोर र बामपन्थी बिचारको संगठन बलियो बन्दै गएको बुद्धिजिवीहरुले बताएक छन् । ‘कांग्रेस भित्रको कमजोरीको फाइदा लिंदै जिल्लामा बामपन्थी संगठन फस्टाउदै गएको हो’ कांग्रेस शुभ चिन्तक शिक्षक मनोहर पन्तले भने, ‘कांग्रेसले सुर्धान सकेन भने बामपन्थी किल्ला बन्न सक्छ ।’
उनले कांग्रेस भित्रको गुट उपगुटको द्वन्द्वको परिणाम स्थानीय तहको चुनाव देखिएको पनि बताए । ‘कांग्रेसले कांग्रेसीलाई भोट दिएनन्’ उनले भने, ‘त्यसैले अमरगढी नपा जस्तो ठाउँमा एमाले जित्यो ।’ त्यस्तै कांग्रेस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष कर्ण मडैले अमरगढीमा कांग्रेस हार्नुको मुल कारण कांग्रेस भित्रकै टिकट बितरण सहि नहुनु बताए । ‘केन्द्रबाट राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई दिईयो परिणाम यस्तो आयो’उनले भने, ‘गाउँको सक्रिय सदस्यहरुको भेलाबाट वडामा, नगरको भेलाबाट उम्मेदवार छनौट भई गरिएको सिफारिस अनुसार दिएको भए, कांग्रेस हार्दैनथ्यो ।’उनले टिकट बितरण पछि पनि असन्तुष्ठ भएका कार्यकर्ता नेता सवैलाई मिलाउन नसकिएको बताए ।